Caalamka, 01 January 2015
China: 35 ku Dhintay Xafladda Sanadka Cusub
Ugu yaraan 35 qof ayaa ku dhimatay magaalada Shangahai ee dalka China ka dib markii ay dad badan oo u dabaal degayay soo dhawaynta sannadka cusub ay is jiidheeen.
Falastiin ayaa raadinaysa inay ku biiraan Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah ka dib markii uu guul darraystay qaraar qabyo ahaa oo wakhti kama dambays ah u qabanayey Israel inay ka baxdo dhulka ay haysato
Dhacdooyinkii Dunida ee 2014
Waa barnaamij gaar ah oo VOA ka diyaarisay dhacdooyinkii u weynaa ee dunida ka dhacay sannadkii 2014.
Ukraine iyo Xidhiidhka Cusub ee NATO
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa saxeexay sharci dalkaas kaga baxayo hannaankii dhexdhexaadnimada isla markaana keenaya inuu u janjeedhsado dhinaca NATO oo ah isbahaysiga quwadaha reer GAlbeedka
Indonesia: Diyaarad la Baadigoobayo
Madaxa wakaalada dalka Indonesia u qaabilsan baadigoobka iyo gurmadka ayaa sheegay inay u badantahay in diyaaradii la waayay ay ku jirto badda gunteeda.
Diyaarad ay leedahay shirkadda Air Asia oo ah nooca Airbus A3200-200 ayna la socdeen 162 rakaab ah ayaa la waaya. Diyaaradan ayaa ka duushay magaalada Surabaya ee Indonesia, kuna socotay dalka Singapore.
Malaysia: Daadad Khasaare Ba'an Geystay
160, 000 oo qof ayaa ku baro kacay roobab laxaad leh oo daadad qasaare badan dhaliyay ka gaystay ilaa 8 gobol oo ku yaala dalka Malaysia.
CPJ: 60 Weriye ayaa la Dilay Sannadkan
Ururka caalamiga ah ee difaaca saxafiyiinta ee CPJ ayaa sheegay in sanadkan 2014 ay sare u kacday tirade saxafyiinta caalamiga ah ee la dilay.
Pakistan: 141 ku Dhintay Weeerar Iskuul
141 qof oo u badan caruur ayaa ku dhintay kaddib markii ururka dabley ka tirsan ururka Taliban Pakistan ay weerareen iskuul uu militarigu maamullo oo ku yaalla magaalada Pishawar, 122 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi.